Maxa iska Badalay Kharashaadka Xajka ay ku tagijiren somalidu xili kusimaha wasirka awqaafta uu ku suganyahay sucuudiga | Puntland
Maxa iska Badalay Kharashaadka Xajka ay ku tagijiren somalidu xili kusimaha wasirka awqaafta uu ku suganyahay sucuudiga
Jul 13, 2018 - Aragtiyood
Ku simaha Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ahna Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Mudane C/xakiin Xasan Ibraahim Ashkir oo waraysi siiyay warbaahinta dowladda, isaga oo ku sugan wadanka Sacuudiga ayaa wuxuu ka warbixiyay kulamo uu halkaasi kula qaatay masuuliyiin ka tirsan Wasaaradda Xajka ee dalka Sacuudiga.
Wasiirka ayaa sheegay inuu kala hadlay arrimo ay ka midyihiin safarka Xujayda Soomaalida ay ku tagayaan dhulka Barakaysan iyo sidii ay u heli lahaayeen adeegyo dhamaystiran oo la mid ah kuwa ay helaan xujayda wadamada kale ka imaanaya.
Mudane C/xakiin Xasan Ibraahim Ashkir ayaa sidoo kale sheegay iyadoo ay iskaashanayaan Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta iyo Shirkadaha Diyaaradaha in maalinta Axada ah ee soo socota ay gudbin doonaan jadwalka Duulimaadyada Xujayda, ka dibna ay bilaaban doonaan duulimaadyada dadka Soomaaliyeed ay ku tagayaan Wadanka Sacuudiga si ay u soo gudtaan Acmaasha Xajka.
“Waxaan rajeyneynaa arrimaha xujeyda Todobaadkan inaan si hufan u dhameyno, waxaan kulamo la yeelanay masuuliyiinta dowladda Sacuudiga, xujeyda lacagihii laga qaadi jiray hada waan soo yareynay, maalinta Axada ah ayan gudbin doonaa jadwalka Duulimaadyada xujeyda, waxaan la mid nahay wadamada asaageena ah.” Ayuu yiri Wasiir Askhir.
Dhanka kale Wasiir Ashkir ayaa sheegay in aysan waxba iska badalin dadaaladii ay waday dowladda ee la xariiray in la yareeyo lacagaha badan ee dadka Soomaaliyeed ay ku tagi jireen Xajka, wuxuuna xusay wasiirka in haatan Qofkii xajinaya laga qaadayo lacag dhan 3,300$, halka markii hore laga qaadi jiray qofkii 3,850$.